ကြော်ငြာနှင့်ကျင့်ဝတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြော်ငြာနှင့်ကျင့်ဝတ်
Posted by နည်ရဲဇော် on Jul 21, 2011 in Creative Writing, Critic, Think Different |9comments
မနေ့က အိမ်မှာကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာကုန်နေ၍ ဆပ်ပြာတစ်တုံးဝယ်လာခဲ့သည်။ ထုပ်ပိုးပုံက သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် အကုန်လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည်။ အစက နိုင်ငံခြားက လာတာထင်ထားတာ သေချာဖတ်ကြည့်မှ Made in Myanmar ဆိုတာတွေ့ရတော့ နည်းနည်း ဂုဏ်ယူမိသွားသည်။ တို့နိုင်ငံလည်း မခေဘူးပေါ့။ ဒါမျိုးတွေနိုင်ငံတစ်ကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းထုတ်နိုင်နေပြီပဲ။ ကျွန်တော်က လည်းအကျင့်တစ်ခုရှိတာက ကုန်ပစ္စည်းကြေညာလေးများတွေ့ရင် သေသေချာချာ လိုက်ဖတ်တတ်သည်။ အဲဒီ ဆပ်ပြာရဲ့ကြော်ငြာလေး
ဖတ်ကြည့်ရင်းက ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ့လာသည်။ xxx promotes good health and safe hygiene.
Herbal contents prevent itchiness and skin inflammation. (ဘာဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေလဲမသိ)
Naturally formulated menthol generates coolness and freshness all day long. (ရေချိုးပြီး
ငါးမိနစ်မကြာ ကားစောင့်ရင်း ချွေးတွေပျံလာသည်။) ဒီအထိကိစ္စမရှိသေး။ ကြော်ငြာပဲဆိုပြီးနားလည်ပေးလို့ရသည်။ ပြဿနာက xxx rejuveate skin moisture, smooths and softens skin. ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ ဖတ်ရင်းတန်းလန်း ရပ်နေမိသည်။ အသားအရည်ကို ပြန်လည်နုပျိုချောမွေ့ စေတယ်ဆိုပါလား။ ဒါဟာကြော်ငြာတစ်ခုမကတော့ပါ။ စားသုံးသူကို ၄င်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ ကတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပါသည်။ ၄င်းစာတန်းကို မြန်မာလိုရေးသည်ဆိုပါစို့။ မြန်မာစာဖတ်တတ်သူ တောလုံမေတစ်ယောက်က အသားအရည်ချောမွေ့လို၍ မျှော်လင့် ချက်တစ်ခုဖြင့်၎င်းဆပ်ပြာကို ၀ယ်သုံးပါပြီတဲ့။ ၄င်းမျှော်လင့်ချက်ပြည့်ပါမည်လား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက xxx rejuveate skin moisture, smooths and softens skin. ဆိုသည့်စာကြောင်းကို မည်သည့် သုတေသန အထောက်အထားကိုအခြေခံ၍ ကြော်ငြာရသည်လဲ။ အမှန်တကယ် စမ်းသပ်ပြီးမှရေးသည်လား။ ဒါမှမဟုတ် လူအထင်ကြီးအောင်ပဲရေးသည်လားဆိုတာတော့ ကြော်ငြာရှင်မှသာ သိနိုင်ပေမည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က “ဒါကြော်ငြာလေ။ကြော်ငြာဆိုတာ ဒီလိုပဲ ရေးရပြောရတာပဲ” ဆိုလျှင်တော့
“unfair and deceptive acts or practices in commerce” စားသုံးသူအတွက် မျှတမှုမရှိသော၊
Product Labeling နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Labels must be “truthful, accurate, and substantiated” with evidence to back up any labeling claims. ကုန်ပစ္စည်းပေါ်မှာရေးသားသည့်အချက်အလက်များသည် “မှန်ကန်မှုရှိရမည်၊ တိကျရမည်၊
အထောက်အထားနှင့် မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်ရမည်” တဲ့။ ကဲ ဒီလိုဆိုရင်ကော ကျွန်တော်တို့ဆီက
နှစ်ချိုက်စွာအားပေးပါသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်လေ စားသုံးသူကို စော်ကားသော၊ သေးသိမ်အောင်လုပ်သောကြော်ငြာသူတစ်ချို့တို့ကိုတော့စိတ်ပျက်မိသည်။ ကြော်ငြာစာသား ဆန်းရင်ပြီးရော၊ လူသိရင်ပြီးရော ရေးချင်ရာရေးထားသည်။ စကားလုံးများ၏ နောက်က ရိုက်ခတ်မှုကိုအလေးမထား။ ဒါမှမဟုတ် တမင်ပွဲဆူအောင်လုပ်ပြီး လူသိအောင်များဈေင်တာလဲဖြစ်မည်။ “ခေတ်မှီသူတိုင်း XXX ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးကြတယ်” ဆိုသည့်စာသည် ၄င်းပစ္စည်းကို မသုံးသူများ အား ခေတ်မမှီဟု သွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စားသုံးသူ၏ ရေးချယ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တာမွေအ၀ိုင်းရောက်တိုင်း “အပျော့ကြိုက်လျှင် ရေသောက်ပါ” ဟူသည့် စာတန်းကိုမြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြင့် “အေး အပြင်းကြိုက်ရင်လည်း အရက်ပဲသောက်တော့မယ်” ဟုတုံ့ပြန်မိသည်။ (BCAP Code 3.14 Advertisements must not suggest that their claims are universally accepted ifasignificant division of informed or scientific opinion exists.)
မည်သည့်ကြော်ငြာမဆို အခြေခံအားဖြင့် လူမှုရေးတာဝန်သိတတ်မှု (social responsibility) တော့ရှိရမည်။ သာမန် ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းတွေနှင့်စဉ်းစားလျင်ပင် ဘာကို ဘယ်လိုကြော်ငြာသင့်တယ်၊ မသင့်ဘူး
ပို့စ်လေးကို သဘောလဲကျ ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်
စားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အသံတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ထွက်တော့လာနေပြီ တိတိကျကျပေါ်မလာသေးတာခက်တယ် ပြည်သူလူထုပဲ ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားရမှာ
ကိုနည်ရဲဇော်ပြောတဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး(သူတို့ ကြော်ငြာအားလုံးကအဲဒီပုံစံတွေချည်းပဲ) စာသုံးသူကို အထက်စီးက အမိန့်ပေးနေသလိုခံစားရတဲ့အတွက် တခါတလေမှ သောက်တတ်တဲ့ ကော်ဖီမစ်တောင် အဲဒီတံဆိပ် မသောက်ဖြစ်တာကြာပြီ
ရှင်းရှင်းပြောရရင် လုပ်ငန်းပြိုင်ဖက်တွေ ရှိနေကြတယ် .. သူတို့အချင်းချင်း တိုက်နေတာကို ကြော်ငြာထဲမှာ ထည့်ရေးကြတာ .. အလွန်အကျူး ဖွဲ့ဆိုကြတာ .. ဗမာတွေကလဲ ညာကျွေးရင် xxx တောင် စားမယ် လို့ ထင်ထားကြတယ်လေ ..
မြန်မာပြည်မှာ.. ဥပဒေဘွဲ့ရတွေအလုပ်လည်းရ.. လူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်… ရှေ့နေတွေစုပြီး… စားသုံးသူအခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့.. အဖွဲ့ ဖွဲ့ .. အလုပ်လုပ်သင့်တယ်..။ စီးပွားရေးတခုအနေနဲ့ကို လုပ်သင့်တယ်..။
စားသုံးသူ(လူထု)ကလည်း..ထစ်ကနဲ့ဆို.. ကုန်ထုတ်နေသူတွေကို… ပြဿနာရှာပြီးကို တိုင်သင့်..တရားဆိုင်သင့်တယ်..။
ယူအက်စ်..လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အစိုးရရဲ့.. ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးတခုကိုညွှန်းချင်ပါတယ်..။ မြို့တိုင်းမှာ.. အဲဒါမျိုး ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေရှိပါတယ်.။ မြန်မာပီပီ..ယောင်လို့တောင် အနားမကပ်ဖူးပါဘူး…။ တိုင်လည်းမတိုင်ဖူးဘူး..။
လုပ်ငန်းရှင်တွေက မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက် အပြည့်အ၀ တာဝန်မယူကြဘူး
တကယ့်သိန်းဆုကြီးကြီးပေါက်မဲက ကြော်ငြာထဲမှာပြောသလို ပါချင်မှပါမယ်
တချို့ကလည်း အ,လို့ ကြော်ငြာရဲ့ အညာခံရတယ်
တချို့ကတော့ သိရဲ့သားနဲ့ ဒါတွေပဲသုံးစရာရှိလို့(ဒါတွေပဲတတ်နိုင်လို့) သုံးကြတယ်
ကြော်ငြာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် အသားဖြူမယ်၊ ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေ့ါ
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား လေးငါးရာနဲ့…..တကယ့်သနပ်ခါးတုံးဈေးက နည်းမှမနည်းဘဲ
ဒါလည်း သိရက်နဲ့ မသိရက်နဲ့ သုံးကြရတာပဲ
ကြေငြာကောင်းရင် ……….. တောင် ဝယ်သုံးမယ်ဆိုလားပဲ
အဲတော့ လူတွေ ပစ္စည်းကောင်းတာ မကောင်းတာ ထက် ကြောငြာလေးကောင်းရင်
စမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီး ဝယ်ကြရော အဲဒီတည်း ကိုယ်တွေတောင် တစ်ခါတစ်လေ ပါသွားတက်သေးတယ် ။
expire date ကိုကြည့်ဖို့ မသိကြသေးဘူး၊ဆေးဝယ်တာ expire date ဖြစ်နေလို့ ဆိုင်ရှင်ကိုပြောတာ
ခင်ဗျား လူ့ ဂွစာပဲဗျ လို့ အပြောခံရဘူးတယ်။
စူပါ ရဲ့ ကြော်ညာတွေကို သိပ်သဘောမကျဘူး။
အပျော့ကြိုက်လျှင် ရေသောက်ပါ ဆိုတာ ဆဲနေ သလိုပဲ..
ဘ၀င်မကျပေမဲ့ မြင်ရင် မြင်တယ်လို့သာ သဘောထားပြီး ကျော်သွားလိုက်တာဆိုတော့.. ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
အဲဒီ ကြေညာမှာ.. လူကြီး တယောက်ယောက်ကို တိုက်ခိုက်သလို ထိပါးသလို များ ဖြစ်လို့ကတော့လား..
မှတ်မိကြလား.. ဖက်ရှင်မယ် ဒီဒီမှာ ပြက္ခဒိန် ရိုက်နေတာ ဆိုတဲ့ ကြေညာလေး.. လုံးဝ မပြတော့ဘူး.. နောက်ကွယ်က တီးတိုး စကားများတောင် ကျန်ခဲ့သေးတယ်။
သက်ပြင်း….. ဟင်း ကနဲချမိတယ်။
လိုသေးတယ်၊ လိုနေသေးတယ်၊ လိုကိုလိုပါတယ်…..
သူတို့ကတော့ ထောင်ထဲမှာတောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဆိုပဲ။
အော်…. ငါတို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး